Kazakhstan: Ny Fandinihantena Ataon’ny Tontolon’ny Blaogy · Global Voices teny Malagasy
Kazakhstan: Ny Fandinihantena Ataon'ny Tontolon'ny Blaogy
Voadika ny 15 Avrily 2018 7:03 GMT
Tsy ela akory izay, toa lasa nahaliana tampoka ny tontolon'ny blaogy Kazakhstana ny famaritana ny atao hoe blaogy sy ireo fiantraikany. Namokatra andiana lahatsoratra maro saika tamin'ny fotoana mitovy mikasika ity lohahevitra ity ireo blaogera. Sarotra ny hilaza marina izay anton'ny onjam-pandinihantena marobe tahak'izao – angamba vokatry ny fidangànan'ny fifantohantsainan'ireo mpanolotra iraisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana ny fanaovan'ny olom-pirenena gazety, angamba noho ny andiana fifaninanana ”blaogy tsara indrindra” (farafahakeliny fifaninanana telo no mitranga izao no misy – ny fifaninanana MediaNet's, neweurasia ary ny fifaninanana vatsian'ny Hivos, karakarain'ny CJ.kz; ary ny sasany efa lasa aloha), na koa avy amin'ny fahamatoran'ny tontolon'ny blaogy tenany.
Milaza i Mantrov fa, araka ny traikefa ananany, ny fanaovan'ny olom-pirenena gazety – famantarana ny fahamaroan'ny demôkrasia – dia rehefa manadihady lohahevitra iray manokana ny mpikatroka ety amin'ny aterineto na ny mpanao gazety iray, tsy noho ny fitondrana anaram-boninahitra, fa voalohany indrindra, noho izy (lahy na vavy) tototry ny olana ary manandrana mamaha izany.
Arafitr'i Aftakep ho anaty teboka telo ny fahalianany amin'ny blaogy:
”1. Fanehoana ny hevitry ny tena. Tadidinao ve ilay Piramidan'ny Filàna nataon'i Maslow? andalana roa ambanin'ny firaisana ara-nofo monja no misy ny fanehoana ny hevitry ny tena – tena akaiky. Maninona no mipoitra ny bilaogy raha ny eritreretrao?
2. Fitehirizana eritreritra hendry.
3. Fomba tsy nalaina tàhaka natao ho fifandraisana. Miorina tanteraka amin'ity fanirian'ny olombelona ity ireo tambajotra sosialy: olom-pantatra vaovao, fiainan'ny hafa. Milay.”
Toy ny fitaovana fanaparitahana ny hafany no fahitan'i Megakhuimyak ireo blaogy. ‘‘Mahaliana , ireo Rosiana mpanohitra – mifanohitra amin'ireo Kazakh mpanohitra – dia manana tambajotra, fidirana amin'ny fahitalavitra ary laza sasantsasany eny anivon'ny fiarahamonina. Na izany aza, samy manao blaogy avokoa izy rehetra ireo, toa an'i Nikita Belyh mpitarika ny SPS na i Boris Nemtsov mpitarika liberaly, satria tsy tian-dry zareo intsony ny hanary vintana hahafahany miaraka miasa amin'ny fitambaran'ny mpifidy sy hahazoany marika ara-politika fanampiny. Mitaraina fotsiny ireo mpikambana mpanohitra aty amintsika hoe tsy afaka manao na inona na inona mba hampielezana ny heviny. Saingy toa tsy te-hanao izany fotsiny tsotra izao izy ireo. Izao no mahatonga azy ireo hanana tahàn-daza toy izany”.
Niara-navoaka tao amin'ny neweurasia.